Sawirro: Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS oo isku soo sharraxay HOP#187 - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS oo isku soo sharraxay HOP#187
Sawirro: Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS oo isku soo sharraxay HOP#187
Baydhabo (Caasimada Online) – Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cali Saciid Fiqi ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey musharraxnimidiisa kursiga HOP#187 ee Golaha Shacabka, Baarlamaanka Federalka Soomaaliya.
Fiqi ayaa isla maanta qaatay shahaadada musharaxnimada, isaga oo ka guddoomay guddiga SEIT ee dowlad Koonfur Galbeed Soomaaliya.
“Gudiga Hirgelinta Doorashooyinka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed (SEIT) ayaa Shahaadada Musharaxnimada Xildhibaan Gudoonsiiyey Dr Cali Saciid Fiqi oo U-Tartamaya Kursiga Tirsigiisa uu yahay Hop-187,” ayaa lagu yiri war qoraal ah ka soo baxay guddiga.
Kursiga uu haatan isku soo sharraxay Fiqi oo si gaar ah loogu xiray ayaa waxaa horey ugu fadhiyey Shariif Sheekuna Maye oo ka tirsanaa Baarlamaankaii 10-aad ee dalka.
Dr Cali Saciid Fiqi ayaa horey isaga oo ahaa safiirka Soomaaliya ee Ururka Midowga Yurub loo doortay guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed, haddase wuxuu u xuubsiinayaa Golaha Shacabka, isaga oo taageero weyn ka helaya Madaxweyne Cabdiciis Lafta Gareen.
Sidoo kale ninkan waxa ay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday, Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo, ayada oo wararka ay intaas ku darayaan inuu doonayo inuu u tartamo guddoonka sare ee Golaha Shacabka.
Xubnaha kale ee maanta qaatay shahaadada musharaxnimada waxaa ka mid ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Xamza Saciid Xamza oo u tartamaya HOP#194.
Koonfur Galbeed oo maamullada ugu horreysa doorashada ayaa soo saartay xildhibaano u badan dhalinyaro, kuwaas oo bedalay rugcadaayaashii muddada kusoo jiray Baarlamaanka.